Maxkamadda Ciidamada Soomaaliya: Lama sii deyn Col. Tawane ee waa maxbuus – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Maxkamadda Ciidamada Soomaaliya: Lama sii deyn Col. Tawane ee waa maxbuus * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maxkamadda Ciidamada Soomaaliya: Lama sii deyn Col. Tawane ee waa maxbuus
By A warsame on 13th February 2014
Baledweyne – Mareeg.com: Maxkamada Ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay taliyihii Ciidamada milateriga Gobolka Hiiraan Col. Tawane Axmed Gurey oo maalmihii lasoo dhaafay ku xirnaa Muqdisho, islamarkaana shalay la geeyey magaalada Beledweyn.
Gudoomiyaha Maxkamada ciidamada qalabka sida Col. Liibaan Cali Yarow ayaa beeniyey in maxkamadda ciidamadu sii deysay Col. Tawane, iyadoo wararkaas aya shalay baahiyeen qaar ka mid ah Idaacadaha Muqdisho.
Col. Liibaan Cali Yarow ayaa warbaahinta u sheegay in Col. Tawane yahay eedeysae maxbuus ah ayna la eedeysan yihiin 3 sarkaal oo kale, wuxuuna xusay in afartsaa sarkaal loo heysto sarkaal horay loogu dilay Baledweyne oo lagu magacaabi jiray Col. Xaashi Xuseen Diriye.
Gudoomiyaha maxkamada ciidamada qalabaka sida ee Soomaaliya Liibaan Yarow ayaa xusay in Col. Tawane lagu wareejiyey laanta maxkamadda ciidamadu ku leedahay gobolka Hiiraan, maadaama falka loo heysto uu ka dhacay Baledweyne.
“Ninkaas waxaa lagu magacaabaa Tawane, wali waa eedeysane isaga iyo saddex kale, lama sii deyn, waxaa loo wareejiyay Maxkamada ciidamada qalabka sida faraceeda Beledweyn” ayuu yiri Liibaan Yarow.
Wuxuu sheegay Liibaan Yarow in la go’aamiyey in ciidamada nabadsugidda qaranku Col. Tawane ku wareejiyaan ciidamada Jabuuti ee Hiil Qaran ee ku sugan Baledweyne si ay u horgeeyaan maxkamadda ciidamada qalabka sida.
Col. Tawane ayaa loo heystaa inuu ku lug lahaa dil bishii December ee sanadkii hore Baledweyne loogu geystay sarkaal ka tirsanaa ciidamada milateriga Soomaaliya, kaasoo la oran jiray Col. Xaashi Xuseen Diriye.
Waxaa sidoo kale loo heystaa Col. Tawane inuu u hanjabay maxkamadda ciidamada qalabka sida qeybta gobolka Hiiraan, iyo inuu horjoogsaday shaqadeeda, sida uu Mareeg Media u sheegay sarkaal sare oo ka tirsan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada Laanta Hiiraan.
Col. Twane ayaa markii hore lagu xiray dacwad ay soo gudbisay maxkamadda ciidamada gobolka Hiiraan, waxaana looga yeeray Muqdisho oo markii uu yimid la qabtay lana dhigay xabsiga dhexe, kadibna shalay loo celiyey Baledweyne.